ခင်မင်းဇော်: ဂျာမဏီကို ရောက်ခဲ့တယ်...
ပျော်စရာကြီးနော် အမရေ... ဒီဘက်ကို ဘယ်တော့ လာလည်မှာလဲ
ဟိဟိ.. သမီးတို့ကို ချောတယ် ပြောလို့..
ရောက်ဖူးချင်လိုက်တာ။ နောက်နှစ် summer ကျရင်တော့ Europe သွားလည်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားအုံးမယ်။
အယ် ရေမှာရင် ဆိုဒါပေးသတဲ့လား။
မခင်မင်းဇော် နော်ဝေးကနေ ဂျာမနီကိုအလာမှာ ရောက်ခဲ့တဲ့ လေယာဉ်ကွင်းက Frankfurt-Hahn လေဆိပ်ပါ။ အဲဒီကနေ မြို့ထဲကို ဘတ်စကား ၂ နာရီ စီးရပြီး ကားခက ၁၂ ယူရို ဖြစ်ပါတယ်။ ( ၂ ယူရို မဟုတ်ပါ)
အဲဒီလေယာဉ်အကြောင်း ကျနော့် ဘလော့ဂ် မှာ ပို့စ်တခု ရေးဖူးပါတယ်။ ဒီမှာပါ။
ဖရန့်ဖွတ်ကနေ ကိုလုံးကို ဆက်သွားတဲ့အကြောင်းလည်း ရေးပါဦး။
ကိုသက်ဦးရေ.. ၁၂ နဲ့ ၂ နဲ့ မှားတတ်ပ ဟိဟိ ပြင်လိုက်ပြီ။
မ ရေ… ဂျာမဏီက မ ပုံလေးက နုနေတာပဲ… ကလေးလေးကျနေတာပဲ… new yrအတွက် ခွင့်ယူပြီး ဈေးဝယ်ထွက်တယ်တဲ့… ကောင်းလိုက်တဲ့ဘ၀တွေနော်… ဒီမှာလဲ ကုတ်နဲ့ ရေနဲ့ ဈေးတူတူပဲ မ ရဲ့…
နော်ဝေ ဒိန်းမတ် ဂျာမဏီ ရောက်ပြီး ကျွန်နော့်ဆီကျ မလာသွားဘူး မောင်ငြိမ်းချမ်းပြောတော့လာမယ်ဆိုလို့မျော်လို့ 
ဦးမင်းဇော် ကြီးနဲ့ တွေ့ မှ တိုင်ပြောဦးမယ်
ဒီဘူတာ က သန့်ရှင်းသမား က အလုပ်လဲမလုပ်ဘူး မတ်တပ်ရပ်နေပါလာ
အစ်မရေ လာဖတ်သွားတယ်။ မသီတာ Face book မှာ အစ်မပုံ တွေ့လိုက်သေးတယ်။
အင်တာနက်ပျက်နေလို့ .. ကောမန့်တွေ မပြန်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်..
ရီနိုရေ.. အမလဲ ကိုယ့်စားရိတ်နဲ့ ကိုယ်သာဆို သွားဖြစ်မယ် မထင်ပါဘူး။ အသိမိတ်ဆွေတွေက ဖိတ်ခေါ်ကူညီကြလို့ပါ။
ကိုတိုးကြီးတို့ ဖင်လန်ကို မလာဖြစ်ဘူးပြောလို့ မောင်ကြီးငြိမ်းချမ်းက ဂျာမဏီသွားဖို့ ခရီးစရိတ်ပို့ပေးလိုက်တာလေ..
hi!! nice trip.